भरतपुर महानगरः शुक्रबार दिनभर मतअन्तरको महाहंगामा (समीक्षा)
HOME » भरतपुर महानगरः शुक्रबार दिनभर मतअन्तरको महाहंगामा (समीक्षा)
डिसी नेपाल , ५ जेठ २०७४
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मतदान क्षेत्र र उनकै छोरी रेणु दाहाल उम्मेदवार समेत रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको मतपरिणमले सबैको ध्यान खिचेको छ।
बिहीबार रातीसम्म भरतपुर महानगरपालिकाकी कांग्रेस/माओवादी गठबन्धकी साझा मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाललाई उल्लेख्य मतले पछाडी पार्दै अग्रस्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली शुक्रबार बिहानसम्म आईपुग्दा एकाएक ८३ मतले पछाडी परे।
भरतपुर महानगरको वडा नम्बर ६ को मतपरिणामले अग्रता उल्ट्याइदिएर हलचल नै ल्याइदियो। एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनवटै दलले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भरतपुर महानगरमा एमाले अग्रता तोड्ने कारक यही वडा नम्बर ६ बन्यो। जहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार हरिबिलास कोइरालासहित उनको प्यानल नै भारी मत अन्तरले विजयी बन्यो। वडा नम्बर ६ को त्यो मतले मेयर पदको मतअन्तरलाई पनि उल्ट्याएर युटर्न गरिदियो। यो शुक्रबार सवेर बिहानको कुरा।
६ पछि वडा नम्बर ७ को मत गणना नतिजाले माओवादीले पाएको त्यो अग्रता क्षणभर पनि टिकाएन। एमालेले आफ्नो अग्रता खोसेर फेरी लिड गर्यो।
एमालेका उम्मेद्वार राजेन्द्रमणि काफ्ले भरतपुर ७ मा विजय भए। वडा नम्बर ७ को मतले रेणु दाहालको मत अग्रतालाई फेरी तोड्यो। देवी ज्ञवालीले ५२९ मतले लिड गरे।
दिनभर यी दुई उम्मेद्वारले अग्रता आलोपालो बाँडिरहे। वडाहरूको मत गणना हुँदा कहिले रेणु त कहिले देवीले अग्रता पाए।
शुक्रबार मध्यान्नमा अग्रता पाँचसयले बढाएको एमाले विस्तारै कम अन्तरमा खस्कियो। दिन ढल्दै जाँदा माअोवादीको मत पनि बढ्दो क्रममा देखियो। वडा नम्बर ८ गनिसक्दा दुई उम्मेद्वारको मतअन्तरको टक्कर मात्रै २०३ मतको रह्यो। एमालेको अग्रता कायमै रह्यो।
महानगरको वडा नम्बर ८ को मत गणना गर्दा एमालेको मतअन्तर खस्केको हो।
वडा नम्बर ९ मा आएपछि एमालेको स्थिति सुध्रियो। देवी ज्ञवालीले ३४६ मतले अग्रता बढाए।
नेकपा एमालेका यमलाल कंडेलले प्यानलसहित भरतपुर-९ मा विजय प्राप्त भएपछि एमालेका लागि थप राहत मिल्यो।
वडा अध्यक्षमा कंडेलले ४१३ मतअन्तरले विजय प्राप्त गरेका हुन्। वडा अध्यक्षमा एमालेका लागि १५३५ मत र
कांग्रेसको ११२२ मत प्राप्त भएको थियो।
पछिल्लो अपडेटमा देवी ज्ञवाली-१५१५५ र रेणु दाहाल-१४८०९ मतमा छन्। विवाद पछि वडा नम्बर १० को मत गणना यो समाचार तयार पार्दासम्म स्थगित छ।
विवाहपछि मुम्बई छोड्दै सोनम कपुर!
इन्टरनेटमा हलचल पैदा गर्ने यी मोडल को हुन्? (फाेटाेफिचर)
कपिलप्रति भारतीेकाे यस्तो प्रतिक्रिया, जो कसैले हिम्मत गरेका थिएनन्
विद्यालाई करणको प्रश्न– ‘सेक्स पछि के खान्छ्यौ ?’ यस्तो दिइन् जवाफ (भिडियोसहित)
५२ वर्षका हिरोलाई तनावः ८ लाखको चिठ्ठा परेपछि गर्लफ्रेण्ड बेपत्ता
यी बलिउड हिरोइन हुन् ब्राभोकी नयाँ गर्लफ्रेण्ड, पुगिसकेकी छिन् मिस वर्ल्डको सेमिफाइनल
यस कारण आइपीएलमा धमाका मच्चाइ रहेका छन् क्यारेबियन खेलाडी
वीरगञ्जलाई बजेटले उत्साहित गर्छः अर्थमन्त्री
गायक पुष्कल शर्माको मार्मिक लोक गीत “आमालाई अन्तिम चिठी” बजारमा (भिडियासहित)
बैशाख २८ गते मोदी नेपाल आउने, यस्तो छ भ्रमणको कार्यक्रम
गेल र वाट्शनले शतक हान्दा विराट कोहलीलाई टेन्सन, १४ फोटोमा हेर्नुहोस् यसरी खिल्ली उडाइयो
उत्तर कोरियाद्वारा परमाणु परीक्षण नगर्ने घोषणा, अमेरिकाद्वारा स्वागत